Ịchekwa maka Halloween nri abalị, ịma mma na ekike, a ịga nke ọma Halloween ọzọ maka ụmụaka kwesịrị ịkwadebe ụfọdụ Halloween cartoons bụrụ na ndị na-chọrọ na-ekiri jọgburu onwe fim. Ebe a ga-amasị m ịkekọrịta ụfọdụ izi Halloween cartoons / fim na isi akụkọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ spooky na egwu. Ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na nne na nna mma nwere ike ịkọrọ ya na ụmụaka ọnụ. Pịa foto na-ekiri ha na YouTube.
Akara: 7.8 nke 10
Nke a obere akụkọ itịbe ke snowing ụbọchị na ụfọdụ European obere obodo. Nwa agbọghọ nta ahụ - Alma onye yi a-acha anụnụ anụnụ okpu na pink nku uwe runing na-egwuri egwu n'ihu a na-eyi na-nwa bebi ụlọ ahịa. Na mberede, ọ hụrụ na a nwa bebi na yiri ọdịdị ya na ya. Manyere site ọchịchọ ịmata ihe, Alma-ejegharị a spooky na chilly ji egwuri egwu ahịa. Ọ dịghị onye n'ime, ọ bụ jupụtara nwa bebi na doro anya eyeballs. Alma nanị na-eche banyere ya na ịhụnanya a obere ụmụaka ji egwuri egwu ma ọ dịghị maara na ọ bụ n'ihe ize ndụ. Ihe ọ na-amaghị na-na-eru. Nke a bụ ihe magburu onwe obere film na-egosipụta na Halloween n'abalị, nke nwere ike ịkụziri ụmụaka ihe a na-enwe ọchịchọ ịmata ihe na-egbu ndị nwamba. Ọ pụtara na mgbe ụfọdụ anyị kwesịrị nyochaa na-edebe n'ihu na-eme ihe ize ndụ. Enyela ma ọ bụ nọrọ ebe mpụga nke nne na nna 'visual ubi. Family bụ nchekwa.
Akara: 7.3 nke 10
A nwoke steepụ n'ime a dorm na steepụ karama Hallucii. Mgbe waked elu na staire, ihe wired itịbe na ọ dara ke a aru gburugburu. Lanahụrụ site na obere gburugburu, dabara nnukwu gburugburu. Dị ka a ndụ, na azụ pụta, nke na-e si Ascendign ma na-arịdata site MCEscher.
Chainsaw odibo (2007)
Akara: 8.2 nke 10
Chainsaw odibo usoro bụ ọkacha mmasị m, ọ composes nke mara mma na egwu n'ime otu. The egwu bụ na ọ na-egbu niile zombies na Chainsaw otu otu na ọbara idaha. The mara mma na-gụnyere site na ụfọdụ obere nkọwa. Ihe atụ, mgbe di hụrụ nwunye ya nwụrụ anwụ nghọta. Ọ bụ ya bụ Akpata oyi wụrụ na mgbe ahụ na-aṅụ a inu tii. Olee otú ị na-aṅụ a inu tii mgbe ị hụrụ ka onye nwụrụ anwụ ?! Ihe nkiri a na-ewe 4 nkeji ma ọ na e dere ihe nile dị ogologo fim.
Akara: 7.4 nke 10
Nke a bụ akụkọ banyere ịhụnanya. Sparky bụ ihu ọma nke Victor, bụ onye na-ele ndo maka Sparky ọnwụ. Mmụọ nsọ site-awụ akpata oyi ahụmahụ na ụlọ akwụkwọ, Victor chọrọ ka Sparky azụ na-awụ akpata oyi. The ọrụ ebube na-eme mgbe e nwere ịhụnanya. The-eweta-azụ Sparky eju onye ọ bụla, onye na-ewe ya ogologo anu. Otú ọ dị, ịhụnanya n'etiti ha ọgụ ka ihe mgbochi nile oge na oge ọzọ.
The Cat ji aka (2001)
Nke ahụ bụ ihe ndị kasị egwu obere nkiri na ndepụta a dị m n'obi. M hụrụ ya na a n'etiti abalị na m fọrọ nke nta kpuchie m niile anya na ntị rụchaa ya. Na mbụ ebe, ụmụaka nwere ike na-eche na xanthodont agadi nwoke bụ cat na aka. Otú ọ dị, mgbe nwa okorobịa ahụ na-aghọ ndị anụ, unu ga-amarakwa ihe mere.
Gịnị ma ọ bụrụ gị ụmụ nwoke / ụmụ agbọghọ na-adịghị amasị na-ekiri jọgburu onwe nkiri? Ị nwere ike ịkekọrịta a alakpu ụra Halloween akụkọ na ha ebe a.
Apụghị Play MP4 on Apple TV? Edozi.
Olee otú iji tọghata WTV ka AVI ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> 5 Spooky Halloween Cartoons maka Na, kpọrọ asị ma High-gosiri